UN-HABITAT | Preventing the spread of COVID viruses through distribution of home care support packages to target households
UN-HABITAT > News > Preventing the spread of COVID viruses through distribution of home care support packages to target households
The majority of households in the informal settlements of Yangon rely on day-to-day work to meet their basic needs, and they do not have any savings or financial reserves to fall back on in times of crisis. This makes it hard for people to afford health care and other basic services.
Daw Khin Sein and her husband, both 65-year-old, live in the Informal Settlements of Yangon. Her husband is unable to work due to his poor health. Their children also live far away after marriage and are unable to support their parents. She makes about 5,000 MMK per day doing laundry in her neighborhood.
During the COVID-19 outbreak, people in the informal settlements of Yangon hadahard time. At local grocery stores and pharmacies, there were shortages of household items, common medicines, and key medical supplies.
“We couldn’t afford to buy personal hygiene and protective items because prices had risen asaresult of panic buying in stores,” said Daw Khin Sein. She continued, “One day, community volunteers came to our home to deliveraHome Care Support Package that included COVID-19 protective materials, supplements, and instructions on how to use them properly.”
Her eyes welled up with tears as she said, “I’m even more thrilled with the fact that my neighbors and friends who experienced the same difficulties as me and received the materials.”
She smiled and said, “I am grateful to UN-Habitat and the Government of Japan for their assistance, and to the community volunteers who helped with material delivery.”
With the support of the Government of Japan, UN-Habitat is assisting people in Yangon’s informal settlements by raising their awareness on COVID-19 with accurate information, setting up soap-filled hand-washing stations, providing key materials and equipment for personal prevention, and supporting the livelihood of community volunteers.
အိမ်တွင်းစောင့်ရှောက်မှုပစ္စည်းများ ဖြန့်ဝေခြင်းဖြင့် COVID ဗိုင်းရပ်စ် ပျံ့နှံ့မှုကို တားဆီးခြင်း။
ရန်ကုန်မြို့ရှိ တရားမဝင် အခြေချနေထိုင်သော နေရာများမှ အိမ်ထောင်စု အများစုသည် ၎င်းတို့၏ အခြေခံလိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းရန်အတွက် နေ့စားအလုပ်များကို လုပ်ကိုင်ကြရပါသည်။ ၎င်းတို့တွင်စုဆောင်းငွေ (သို့မဟုတ်) အရံငွေ မရှိသည့်အတွက် အကြပ်အတည်းကာလတွင် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့် အခြားအခြေခံဝန်ဆောင်မှုများ ရရှိရန် အခက်အခဲဖြစ်ကြရပါသည်။
အသက်(၆၅) နှစ်အရွယ် ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ဒေါ်ခင်စိန် နဲ့ သူမရဲ့ ခင်ပွန်းတို့ဟာ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ တရားမ၀င်အခြေချနေထိုင်ရာ နေရာတွင် နေထိုင်ကြပါသည်။ ခင်ပွန်းဖြစ်သူမှာ ကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့အတွက် အလုပ် မလုပ်နိုင်ပါ။ သူတို့ရဲ့ သားသမီးများဟာလည်း အိမ်ထောင်ကျပြီးနောက် အဝေးမှာ နေထိုင်ကြတဲ့အတွက် မိဘများကို မထောက်ပံ့နိုင်ပါ။ သူမ သည် ရပ်ကွက်ထဲက အိမ်တွေမှာ အဝတ်လျှော်တဲ့ အလုပ်ကနေ တစ်ရက်လျှင်၅,၀၀၀ ကျပ်ခန့် ရရှိပါသည်။
ကိုဗစ်ကာလအတွင်း ရန်ကုန်မြို့ရှိ တရားမဝင်အခြေချနေထိုင်သူများ အခက်အခဲဖြစ်ကြရပါသည်။ရပ်ကွက်ကုန်စုံဆိုင်များနှင့် ဆေးဆိုင်များတွင် အိမ်သုံးပစ္စည်းများ၊ သာမန် ဆေးဝါးများ နှင့် အဓိက ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအထောက်အပံ့ ပစ္စည်းများ ပြတ်လပ်မှု ရှိခဲ့ပါသည်။
“ကိုဗစ်ကာလမှာ ပစ္စည်းတွေကို အလုအယက်ဝယ်ယူကြတဲ့အတွက် စျေးနှုန်းမြင့်တက်လာလို့ တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးနဲ့ အကာအကွယ်ပစ္စည်းတွေကို ကျွန်မတို့ မဝယ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။” ဟု ဒေါ်ခင်စိန် က ပြောပါသည်။ဆက်လက်၍ သူမ က “တစ်နေ့မှာ ရပ်ရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းတွေ ကျွန်မတို့ အိမ်ကို ရောက်လာပြီး ကိုဗစ်ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းများ၊ ဖြည့်စွက်စာများနှင့် အသုံးပြုပုံ လမ်းညွှန်ချက်များပါဝင်တဲ့ အိမ်တွင်းကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အထောက်အပံ့ပစ္စည်းထုပ် လာပို့ကြပါတယ်။”
“ကျွန်မ လိုဘဲ အခက်အခဲတွေ ကြုံခဲ့ရတဲ့ အိမ်နီးချင်း သူငယ်ချင်းတွေလည်း အထောက်အပံ့ပစ္စည်းများရကြလို့ ပိုပြီးတော့ ဝမ်းသာပီတိ ဖြစ်မိပါတယ်။” ဟု ပြောရင်း သူမ၏ မျက်ဝန်းမှ မျက်ရည်များ ဝဲတက်လာပါသည်။
သူမ က ပြုံးရင်း အခုလို ပြောပါတယ်၊ “အကူအညီပေးတဲ့ UN-Habitat နဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရကိုရော၊ ပစ္စည်းတွေကို အိမ်အရောက်ပို့ပေးကြတဲ့ ရပ်ရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းတွေကိုရော ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။”
ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရ၏ ပံ့ပိုးကူညီမှုဖြင့် UN-Habitat သည် ရန်ကုန်မြို့ရှိ တရားမဝင်အခြေချနေထိုင်သူများအတွက် ကိုဗစ်နှင့်ပတ်သက်သော အကြောင်းအရာများကို မှန်ကန်သော အချက်အလက်များဖြင့် အသိပညာပေးခြင်း၊ ဆပ်ပြာနှင့် လက်ဆေးကန်များ တပ်ဆင်ခြင်း၊ တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေး နှင့် အကာအကွယ်ပစ္စည်းများ၊ အသုံးအဆောင်များ ပံ့ပိုးပေးခြင်း၊ ရပ်ရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းများ၏ စားဝတ်နေရေး အတွက် ပံ့ပိုးပေးခြင်းစသည်တို့ကို ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။